Izizathu zokuba iintlanzi zisweleke, kufuneka zenzeni ukuze ziphile ixesha elide? | Ngeentlanzi
Izizathu zokufa kweentlanzi
Omnye wemibuzo emikhulu esizibuza yona amaxesha amaninzi kukuba kutheni iintlanzi zisifa xa sicinga ukuba silandela ngokufanelekileyo ulondolozo kwaye sinika iintlanzi ukhathalelo olusisiseko. Nangona kunjalo, kuhlala kwenzeka ukuba iinkcukacha ezincinci ziyabaleka kuthi ezingunobangela wokufa.
Ukuba ufuna ukwazi eyona izizathu zokuba iintlanzi zife kwaye ezinye iingcebiso zokwandisa ubomi bakho, yile post yakho.
1 Ukunyamekela itanki yentlanzi
2 Izizathu eziphambili zokufa kweentlanzi
3 Ukuziphatha okungaqhelekanga kwentlanzi
4 Iingcebiso zokwandisa ubomi beentlanzi
Ukunyamekela itanki yentlanzi
Esinye sezizathu siphambili sisemanzini, xa siqala ukucoca itanki yeentlanzi kwaye sisuse iintlanzi ukuze sizibeke kwisikhongozeli esinamanzi ngqo kwimpompo. I-klorine yonakalisa iintlanzi. Kuyacetyiswa ukuba ubandakanye ipesenti ephezulu yamanzi asuka etankini kancinci kwimpompo ukugcina amaxabiso amanzi etankini.
Kufuneka silumke ngesikhongozeli apho sibeka khona iintlanzi, kufuneka sicoceke kwaye singabinabhaktheriya enokonakalisa iintlanzi. Nangona kunjalo, ukuba itanki leentlanzi ligcinwe kakuhle, akukho mfuneko yokuba lisuswe ukuze licocekenjengoko le nkqubo inokuxinzelela iintlanzi kwaye inokuba sesinye isizathu sokuba zife.
Xa ucoca izinto zetanki leentlanzi kuya kufuneka ulumke ungazenzi ngeemveliso zamachiza, ukuba siyenza ngesepha kufuneka uzihlambe kakuhle, nangona kungacetyiswanga, kungcono ukuzicoca zonke ngamanzi ashushu kunye nebrashi.
Ukuxinana kwe-aquarium nako akukhuthazwa ngenxa yoxinzelelo olukhulu, Okukhona iintlanzi zihlala zixinekile, kokukhona kunokwenzeka ukuba zife, njengokuba singenakho ukubandakanya iintlanzi ezingahambelaniyo, ukwenzakala kungatshata phakathi kwabo, ngamanye amaxesha esingakwaziyo ukukuqonda, kwaye baphela besifa.
Esinye isizathu sokuba iintlanzi zife kukutya okugqithisileyo, ke akufuneki sibongamele.
Izizathu eziphambili zokufa kweentlanzi
Nje ukuba sihlolisise ukuba zeziphi iinkathalo ezahlukeneyo ekufuneka ubenazo kwitanki lakho leentlanzi ukuze iimeko zempilo zilungile, siza kubona ukuba zeziphi izizathu eziphambili zokuba iintlanzi zife. Phakathi kwezizathu eziphambili zokufa kweentlanzi zaselwandle luxinzelelo kunye nezifo. Kwaye ezi ntlanzi zibuthathaka kwaye zihlala zihlala zigula ngenxa yenqanaba loxinzelelo abanalo. Kulindelekile ukuba yakuba ihlale kwindawo encitshisiweyo yokuhlala kunye nokuhlala nezinye iintlobo ngokuqhubekayo, ayiyonto izolileyo kubo.
Kwindalo iintlanzi ziyakwazi ukuzimela, ukuzula, ukujoyina ezinye iintlanzi, ukukhuselana, ukukhangela ukutya, njl. Ngendlela yokuba baqhubeke ngokuqhubekayo kwinkqubo yendalo enobukhulu obukhulu kubo. Nangona kunjalo, xa bekwi-aquarium indawo yabo yokuhlala incinci. Konke oku kubi kakhulu ukuba babelana ngendawo yokuhlala nezinye iintlobo zommandla.
Ukuba uza kuthenga intlanzi evenkileni, into yokuqala kukwazi ezona mpawu zixhaphakileyo zihlala zixwayiswa ukuba iintlanzi zixinezelekile okanye ziyagula. Phakathi kwezi mpawu sifumana oku kulandelayo:
Intlanzi yakho ifumana amabala amhlophe kulusu lwayo
Amaphiko entlanzi aqala ukusebenza
I-aquarium ingcolile kwaye ayigcini imeko yezempilo
Iintlanzi zihamba kancinci
Iintlanzi ziqala ukudada ngecala
Ungayifumana intlanzi idada ijonge ezantsi
Ukuba ubona nayiphi na kwezi mpawu kucacile ukuba ezi zilwanyana ziyabonakaliswa okanye ziyagula. Kuyimfuneko ukuba kuchongwe ukuba ngubani na ochaphazeleka kakhulu okanye kuphela umntu ochaphazelekayo kwaye wohlule kwabanye.
Ukuziphatha okungaqhelekanga kwentlanzi
Enye into ebalulekileyo yokwazi ukuba amaxesha agula okanye acinezelekile kukuzothusa phakathi kwabo. Ukuba kukho indibaniselwano yabantu kwi-aquarium, kunokwenzeka ukuba iintlanzi zingangqubana enye nenye kuba zikwindawo enkulu yoxinaniso. Ngale ndlela, bayalonyusa uxinzelelo lwabo kwaye baya kuqhubeka nokudibana rhoqo kwaye banokugqibela ukuzenzakalisa.
Esi sisalathiso esinokubakho kwi-aquarium ayinkulu ngokwaneleyo okanye sinentlanzi ezininzi kunokuba sinokubamba. Njengoko besesitshilo ngaphambili, lumka kakhulu ngokucoca amanzi kunye nokuwatshintsha. Xa uzokutshintsha amanzi akwi-aquarium kuxa iintlanzi zihlala zihlanganiselwa kwiibhakethi okanye kwindawo encinci. Ukuthintela le meko kuhlala ixesha elide kuba ukungqubana phakathi kwentlanzi kunye noxinzelelo olwenzayo kunokubangela ukubonakala kwezifo ezithile.
Kukwakho nabo bachaphazeleka kakhulu. Nangona zizilwanyana ezinomdla, bahlala benovakalelo kutshintsho lokusingqongileyo. Ngokuqinisekileyo ubonile kwii-aquariums ezivenkileni ezithi "ungabethi iglasi" "ungathathi iifoto ngeflash". Imithetho efanayo kufuneka ilandelwe kwi-aquarium yakho yasekhaya. Zizilwanyana ezibuthathaka kwaye zinomtsalane, ke ukuba uhlala ubetha iglasi awuyi kubanika nantoni na elungileyo kwimpilo yabo.
Iingcebiso zokwandisa ubomi beentlanzi
Siza kukuxelela ezinye iingcebiso zokunceda iintlanzi zakho zibe nobomi obude:
Yiphathe ngobunono nangokucocekileyo intlanzi xa ufuna ukutshintsha amanzi etankini. Zama eli xesha liyancipha ivumba elinokwenzeka.
Ukuba unentlanzi entsha, ungabazisi kwangoko.
Ukuba uhlala uneendwendwe endlwini yakho, kungcono ukuba ungabethi iglasi ye-aquarium okanye wenze ingxabano enkulu.
Ayikhuthazwa nika ukutya okugqithisileyo njengoko inqanaba le-ammonia lonyuka kwaye iintsholongwane ezininzi zivela emanzini.
Akucetyiswa ukudibanisa iintlanzi ezingahambelaniyo kwi-aquarium efanayo. Kubalulekile ukwazi indlela eziphatha ngayo iintlobo nganye.
Kunika umdla ukubona zonke iinkcukacha zamanzi, ubushushu, inani lemitha yelanga, inqanaba leoksijini, njl. abadinga intlanzi oza kuyizisa kwi-aquarium.
Ukuhombisa i-aquarium, vumela ukuba uchithe imali encinci kwaye uqinisekise umgangatho wayo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ezona zizathu ziphambili zokuba kutheni iintlanzi zihamba kunye neengcebiso zokwandisa ubomi bazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Izizathu zokufa kweentlanzi
UALEJANDRO MARTINEZ sitsho
izolo ndithenge iintlanzi zaseJapan. Bekukho i4 kodwa enye ibomvu ibemhlophe.Xa ndiyifaka etankini, ndiye ndazishiya ezingxoweni zazo kangangemizuzu eli-15 kwitanki ukuze ziqhelane nazo. Xa bekhululiwe baqala ukudada ngesiqhelo, izolo ndihlambile isihluzo, iintlanzi zibukeka zilungile. Kodwa ngale ntsasa intlanzi ebomvu nomhlophe ivuke ifile. Kuba ndiyazi, banokufumana uxinzelelo kwaye inokuba yiyo loo nto.
Ndibeka i-anti-chlorine drop, kunye ne-anti-gong drops, ndihlamba isihluzo rhoqo kwiintsuku ezingama-21 okanye ezingama-0. Andazi ukuba inokuba yintoni.
Phendula u-ALEJANDRO MARTINEZ
Umahluko phakathi kwendoda nebhinqa guppy